TPU / mgbanwe filament
3D ngwa nbipute Ngwa
3D Printing News & Atụmatụ
Ọ bụ The Best WordPress Okwu.
STRONGHERO3D Mee Series ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) bụ zuru okè Nchikota ma àgwà na oké ọnụ 3D ngwa nbipute filament. N'ikpeazụ, eso adịghị mkpa àjà ezi na-achọ Mbipụta iji zọpụta a ole na ole ebu!
Polyethylene terephthalate (PITA) bụ ndị akacha eji plastic na ụwa. Best mara dị ka polima-eji na mmiri na karama-akpukpọ, ọ na-hụrụ na uwe emep uta eri na nri containers. Ezie na "raw" PITA na-adịkarịghị eji 3D obibi, ya variant PETG bụ a na-ewu ewu 3D ngwa nbipute filament.
Mbụ, ọ dị mfe iji na-ebipụta na. PLA nwere ala-ebi akwụkwọ okpomọkụ karịa ABS, na ọ na-adịghị ogologo dị ka mfe, nke pụtara na ọ dịghị achọ ka a kpo oku bed. Ọzọ uru iji PLA bụ na ọ dịghị enye anya ọjọ isi n'oge ibi akwụkwọ.
NET arọ 1KG - More arọ, ọzọ fun, were were PRINT- n'usoro ọbọp, gbazee ọma, ndepụta were were na mgbe niile enweghị karịrị akarị n'ụlọikpe ndị nozulu ma ọ bụ extruder, elu arụmọrụ - Good shaping, ọ dịghị afụ, ọ dịghị jamming, ọ dịghị warping
PLA VX egwurugwu filament
PLA ogwumagala egwurugwu filament
3D Printer Ngwa
Dị ka n'oge dị 2010, Stronghero3D bụ ọsụ ụzọ 3d ebi akwụkwọ filament mmeputa China, elu-tech enterprise nke ọkachamara na nnyocha, n'ichepụta na ahịa nke 3D ngwa nbipute filament. Na onwe ha ikike arịa amamihe, ụghalaahịa Stronghero3D na RainbowME aha ke USA na China, na nchọpụta Kemịkalụ na China. Anyị factory aga ISO 9001: 2015 akwụkwọ. na nwere ọgaranya ahụmahụ ọrụ na ọtụtụ ndị ahịa, na-hụ na Eco ga na-mma anyị onwe anyị na-enye gị elu-edu ihe onwunwe, na izute gị chọrọ.
PLA isi awọ
Adress: 3F, N ụlọ, MaoYuan Ind Park, HuanGuan South R, Guanlan, Shenzhen, Guangdong, China
Ekwentị: +86 13417420468
Hatchbox Petg, Das filament Petg, Pla Petg, Printing Petg On Ender 3, Petg 3d Printer filament, 3d Filament Petg,